“Xasuusta Mucaaridkii Mucaaridka Ahaa” … W/Q: Ahmed Nour Guruje | IctiraafNews.com
“Xasuusta Mucaaridkii Mucaaridka Ahaa” … W/Q: Ahmed Nour Guruje
waxa kale oo iyana jirey xubno kale oo kooxahaas ka madax banaanaa , kuwaasoo ahaa kooxo qubane ah oo iskood si gaar gaara u hawl-gala .
Sanaddii 1998 sanad uu ka dib markii ay dhamaatay doorashadii Madaxwayne ee 1997 , waxa wadanka lagaga dhawaaqay garab loo bixiyey garabka dib u habaynta snm , kuwaasoo isu dhigay urur siyaasadeed cusub , kuwaasoo isu dhigay mucaarid habaysan oo si farshaxanle u dhaliila xukuumadii M I Cigaal .
Kooxdaas iyo koox kale oo ka tirsanayd Baarlamaankii Somaliland ee waagaas ayaa jiibta iyo jaanta isla helay , waxaana si fiican u badhi taaraay saxaafadda madaxbanaan oo ay calanka u sidaan Wargayska Jamhuuriya Newspaper iyo Tv la odhan jirey Somali land Space channel , kuwaasoo si fiican usoo gudbin jiray wararka .
justify;”> waxa kale oo iyana jirey xubno kale oo kooxahaas ka madax banaanaa , kuwaasoo ahaa kooxo qubane ah oo iskood si gaar gaara u hawl-gala .
Kooxda dib u habaynta snm waxaa calanka u siday , Xasan Ciise jaamac , Muuse Biixi ,Maxamed kaahin , Quule iyo qaar kaloo badan , kooxda baarlamaankana , Aare ,Cali Xisbi ,Maxamuud Xaashi , Yuusuf Nuur guruuje iyo qaar kaloo badan , sidoo kale kooxaha madaxa banaan waxaa iyana lagga xusi karaa , Cali qoryoolay , C/rashiid sheekh c/laahi (Rashiid arbaca) Yaxye xaaji Ibraahin Biixi suufi Abokor iyo qaar kaloo badan .
Waayadaas intii aan la gaadhin 2002 oo ay dhacday doorashadii deegaanka , wadanka waxaa ka socon jirey doodo joogta ah oo ku dhisan Shuruuc iyo aqoon heer sarre ah , doodihii waagaa wadanka soo marayna waxaa lagga taaban karaa , Dib u habayntii Distoorka , Laaxin ka saarkii distoorka , maamuus ka xayuubintii baarlamaanka iyo halgankii xuquuqda Xoriyatal qawlka iiyo saxaafadda .
Doorashaddaa deegaanka ka dib, Mucaaridkii wadanku wuxuu isugu tagay Xisbiga Kulmiye Muxaafidkina xisbiga Udub , waxaana mar kale wadanku yeeshay mucaarid adag oo u taagan difaaca dawladnimada iyo toosina xukuumadda .
Faaidooyinka kasoo baxay sooyaalkaa mucaaradadeed ee wadanka soo marayna waxaa lagga tilmaami karaa , ansixinta distoorka , taabo-gellista doorashooyinka iyo xornimadda saxaafadda iyo xaquuqul iinsaanka oo halgan dheer loo soo maray .
Somaliland waxay u baahan tahay dhismaha iyo tayaynta mucaarid wax toosin karra oo karti leh .